Zvirinani ita chokwadi chako Windows 10 zvigamba zvasvika parizvino, seGoogle Projekiti Zero ichangoburitsa Proof yeConcept kodhi yeakango-patched Windows 10 kukanganisa kunogona kushandiswa nekungoshanyira peji rewebhu.
Nyaya iri kukanganisa muMicrosoft DirectWrite, iyo Windows font renderer iyo inoshandiswawo mumabhurawuza ese, uye iri panjodzi yakanyatso nyatso nyorwa fonti yeTrueType iyo inogona kuikonzera kukuvadza ndangariro uye kupunzika, iyo inogona kuzoshandiswa kumhanyisa kodhi pane kernel rombo.
"Yakabatanidzwa chiratidzo-che-chirevo TrueType font pamwe neiyo HTML faira inoisa mukati uye inoratidza iyo AE hunhu," akadaro Google. "Inoburitsa tsaona yaratidzwa pamusoro yakagadziridzwa zvizere." Windows 10 1909, mune ese makuru webhu mabhurawuza. Fonti yacho pachayo yakaiswa pasi kuti ingobatanidza glyph isina kukwana uye kutsamira kwayo. ”
Iko kukanganisa, kwakanyorwa kumusoro seCVE-2021-24093, kwaingove patched pa 9th Kukadzi 2021, zvichireva kuti chero vashandisi vakanonoka kuisa mwedzi uno Cumulative Updates vachiri panjodzi.
Verenga zvimwe nezve iyo nyaya paGoogle pano, uye chigamba komputa yako nekutarisa Zvekuvandudzwa muZvirongwa.
20 Mutsva Mahara Ekushambadzira Fonti ye2021
Maitiro ekuisa Mafonti pane Windows 10
Filed Under: Windows Tagged With: Patch (computing), Chirongwa Zero, Windows 10